Ungayigcina njani isimo sesifuba ngexesha kunye nangemva kokukhulelwa?
Impilo yabasetyhini Ukukhulelwa
Abasetyhini banamhlanje bahluke kakhulu kwabasetyhini bama-Middle Ages, kuba banelungelo lokuvota, uluvo lwabo; bayasebenza kwaye bafumana imali ngokumalunga namadoda kwaye banakho ukuncintisana nabo kwishishini.
Nangona kunjalo, xa ibhinqa likhulelwa, liba sisidalwa esibuthakathaka nesinezintlu, esifuna ukukhuselwa, uxolo, inkxaso evela kwindoda yakhe kunye nezihlobo, kwaye ingqalelo rhoqo. Musa ukuthobela abafazi abakhulelweyo! Abaninzi babo ngexesha lokukhulelwa banokungabinakulinganiswa kwaye babengenangqondo, kodwa ngexesha elinye, umfazi okulindele ukuba umntwana uthathwa njengesidalwa esihle kakhulu emhlabeni (ubuncinane kumyeni wakhe kunye nabathandekayo bakhe).
Nangona kunjalo, abafazi abakhulelweyo abahlali bahlala, bezithemba ngokwabo, njengokuba benza ngaphambi kokukhulelwa, kuba imvelaphi ye-hormonal iyashintsha, i-worldview kunye nokutshintsha kwengqondo, ezinye izinto zibe zixabisekileyo. Ngazo zonke iinqununu, ngamnye umfazi uphupha ngokufihlakeleyo ukuhlala enomtsalane, obumnandi kunye nobumnandi ngexesha kunye nangemva kokukhulelwa. Ngelishwa, ubabalo luyabonakala ngexesha lokuba isisu sisakhula ngokukhula, ubuhle buhamba ngenxa yokuphulwa kunye ne-glitches ye-hormone (kubonakala i-acne, i-rashes kunye nobomvu ebusweni), kuphela isibalo esele sihlala, kodwa sishiya ixesha leenyanga ezithoba (nangona abanye abasetyhini ngexesha lokukhulelwa ayenzi ukutshintsha ngaphandle). Kwaye ngoku isiqingatha esihle sabantu, kunokuba bavuyiswe ngokuzalwa komntwana, bebathukutheze abayeni bakhe ngokuphanda ngemibuzo malunga nokuba "uyayeka ukumthanda emva kokuba elahlekile." Kuvakala kukuhle. Nangona kunjalo, ngokusebenza, kukho ezininzi iimeko.
Kodwa kukho ingxaki bonke abantu besifazane abazama ukuyifihla: ukwesaba ukuba amabele abo akayi kuba se-elastic kunye nentsha, ukuba iya kuxhoma kwaye iya kubonakala njengepare. Kule meko, izidakamizwa ezininzi ezahlukileyo ziza kuhlangulwa, zivela ekutyunjeni kweplastiki kwebele, ziphelisa ngeendlela eziqhelekileyo kunye nokusebenzisa i-crolleté i-creams ebiza kakhulu.
Kodwa ke, bathini, ngabafazi, njani ukugcina isimo sesifuba ngexesha kunye nangemva kokukhulelwa?
Nazi iindlela ezimbalwa ezinokwenzeka zokugcina amabele akho amahle ngexesha nangemva kokukhulelwa.
Inkqubo yokwandisa i-mammary gland ngexesha lokukhulelwa lithenga ngokungafaniyo. Kwiiveki ezilishumi, isifuba sikhula ngokukhawuleza, emva kweeveki ezine inkqubo yokwandisa umthamo wesifuba isamisiwe, kwaye ukuphuhliswa kweengcambu zeemfesane ziqala ngokuphindwe kabini.
Amathuba esikhumba awanqongophe kwaye axhomekeke kwisondlo sowesifazane. Kwaye kuthetha
kungekuphela imenyu ekufuneka iqulethe ukutya ngokucebileyo kwiivithamini A, E no-C, iziqhamo kunye nemifuno ye-orange kunye nohlaza, kodwa kunye nokutya, ngokubanzi. Zigweba wena, ukuba ibhinqa ngexesha lokukhulelwa lifumene ngokugqithiseleyo ubunzima obunzima - isikhumba esiswini sakhe sivalelwa ngumthwalo ophindwe kabini. Kwaye nakwezinye izinto, umthamo weesifuba zesifuba ukwandisa, kwaye ngokunjalo ukugcinwa kwamafutha. Kwisiphumo sokugqibela, isikhumba asikwazi ukujamelana nemithwalo enjalo, kwaye kukho onke amanqaku okulula. Xa ibhinqa likhula kwakhona, isikhumba eselulile esilulayo asikwazi ukubuyela kwimeko yaso yangaphambili, kulo mzekelo isifuba "sixhomeke", kwaye amanqaku atyalileyo aya kuhlala eninzi.
Enye into ebaluleke kakhulu, efunekayo ukugcina isimo sesifuba, ibhon yezinga eliphezulu elinamaqhosha amaninzi, ezenziwe ngezinto zendalo. Kufuneka ixhase ibele kwaye ikhusele isikhumba ekuhleni. Ukukhethwa ngokugqithiseleyo ngaphantsi kweengubo kunokunyusa imeko kwaye kudala umonakalo kwibele. Izambatho zangaphantsi kufuneka zixhase ibele, kodwa, kungabikho ncitshulwa kunye, ngaphandle koko ukujikeleza kwegazi kuphazamiseka.
Makhe sithethe malunga nendlela yokugcina isimo sesifuba emva kokukhulelwa nokondla umntwana. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ibele ayibhekanga kukhangele ixesha elide, kodwa ngenxa yoko, kukho izizathu: okokuqala, ukuguquguquka kokunyuka kwesantya kunetyala, kokubili ngexesha lokukhulelwa kwaye phantsi komgangatho "ukulahleka kwesisindo nokukhathala"; Okwesibini, ubuthakathaka imisipha engaqeqeshiweyo yesifuba nentamo; Okwesithathu, intsimbi encinci yamathambo, kodwa ukuphuhliswa kwayo kunokunika intombazana kuphela ukukhulelwa nokubeletha. Kwaye into yokugqibela engenakongezwa kuloluhlu lulusu lwebele, olude ixesha elingenamsoco kunye nesondlo, ngoko likhula, lithele, lulahlekelwe ukuma kwalo.
Kukho iindlela zokusombulula ingxaki, kodwa iinzame ziya kufuneka zisetyenziswe ngokuphindaphindiweyo ukuze zifezekise umphumo ophezulu kwaye ziqonde indlela yokugcina isimo sesifuba ngexesha nangemva kokukhulelwa. Kufuneka ulayishe imisipha yakho, uqeqeshe kwaye uphuhlise. Ziyakwazi ukulayishwa ngeendlela ezininzi. Indlela yokuqala iyinto eshibhile kwaye ilula ngokwaneleyo: yenza imisebenzi ekhethekileyo yonke imihla ngemizuzu eyi-10. Ukuba uvila ngokwemvelo kukho enye indlela yokuphuma kwimeko eya kwi-masseuse okanye kwi-salon yobuhle kwiprogram ye-myostimulation. Kwinqanaba leendlela ezingabizi kakhulu kwaye zilula zi-hydro massage zesifuba ngexesha lokuhlamba. Iikrama zokukhusela zibambe i-ultraviolet ixesha elide.
Iikrama kunye neeserawu ngokusekelwe kwimihlathi kunye nezicatshulwa ezahlukeneyo zezityalo zinceda kakuhle. Basebenza kangcono ngenxa yeengxube eziphezulu zezinto ezisebenzayo, kodwa ngeendleko, kuya kuba kubi kakhulu.
Ukuba i-mask iyabiza kakhulu kuwe, ngoko uya kufuna isidlo sochumiso rhoqo. Xa usebenzisa i-krimu, ukunyakaza kufuneka kube yile setyhula. Musa ukusikhupha kanzima esifubeni, ulula ulusu.
Ngendlela, ezinye izongezo zokutya ziyakwandisa kwaye ziphoqele ukuzalisa le ndawo, umzekelo, ukunyuswa kwama-cones of hops okanye Ukukhupha. Bancedisa ukuphuhliswa kweeseli zebele.
Ziziphi iindlela zokukhulelwa kweyona ndlela inokuthenjwa?
Iimveliso ezinobungozi ngexesha lokukhulelwa
Ukubunjwa kwe-vitamin complexes kubafazi abakhulelweyo
Siceba ukukhulelwa: iingcebiso kubayeni nabasetyhini
Ukutyelela ugqirha ngexesha lokukhulelwa
Yiziphi iimpawu onokuzijonga ngesondo lomntwana ngaphandle kwe-ultrasound?
Indlela yokuchonga ukukhulelwa kwezigaba zokuqala
Ziziphi iintlobo zeetayiti
Indlela yokuqhuba ukuphefumula ukulahleka kwesisindo
Ikhumba likhupha emva kokulahleka kokunciphisa umzimba
Indlela yokukhusela umntwana kubanda: iimpazamo ezisisiseko zabantu abadala
Ungayikhupha njani inzondo?
Izifo kubantwana abasusela kwi-12 ukuya kwe-14
Ukwabelana ngesondo kunye nomhlobo: i-pros and cons
Iinyani ezingaziwayo malunga nomlomo
Inyaniso yonke nge-cellulite
I-cutlets yenkukhu kunye ne-cottage cheese
I-Pistachio cheesecake cupcakes
Unyango kunye nenyosi yeenyosi
Uyilo lwezitofu ezakhiweyo ekhishini: njani ukuba ungabi lixhoba lefashoni
Iibhisikidi kunye ne-tshokoleta kunye ne-marshmallow
Ieholide zasehlobo zikulindele umntwana